Cele News Archives - Page 49 of 195 - Cele Gabar
Home/Cele News (page 49)
အေးချမ်းပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ထောက်ကြံ့မြို့လေးမှာပျော်နေပြီဆိုတဲ့ မယ်လိုဒီ
ပရိသတ်ကြီးရေ မယ်လိုဒီကတော့ တစ်သားမွေးတစ်သွေးလှဆိုသလို သူမရဲ့ သားလေးသိဒ္ဒိစစ် မွေးဖွားပြီးနောက် အရင်ကထက်ပိုပိုလှလာကာ ကလေးအမေလို့မထင်ရလောက်အောင်နုပျိုနေတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘာသာရေးအရမ်းကိုင်းရှိုင်းပြီး ဘုရားတရားတွေအရမ်းလုပ်နေတာ ပရိသတ်တွေလည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါနော် ။ လတ်တလောမှာတော့ မယ်လိုဒီတစ်ယောက် ထောက်ကြံ့မြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီး ထောက်ကြံ့မြို့နယ်လေးကအေးချမ်းပျော်ရွှင်ပြီး နေချင်စရာလေးပါထောက်ကြံ့ဈေးကလည်း စုံလင်သက်သာဈေးဝယ်လို့ကောင်းပါတယ်(အထူးသဖြင့် ဝက်သားရောင်းတဲ့အန်တီကြီး ၄ပိဿာဝယ်တာ ၁ပိဿာလောက် အပိုထည့်ပေးတယ် ရက်ရောချက်)အသီးသည်အစ်မကလည်းသဘောကောင်းချက် ကြာသာပတေးနေ့ကဝယ်တာ မကောင်းတာ ၁လုံးပါလာလို့ ခု စနေ အစားတစ်လုံးပြန်ပေးပြီး ဈေးပါလျော့ပေးလိုက်သေးတယ် ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ ထောက်ကြံ့မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ ဖော်ရွှေသဘောကောင်းမှုကိုရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။ ထောက်ကြံ့ပျော်လေးဖြစ်ပြီး စိတ်ကလေး အေးချမ်းနေပါတယ်လို့လည်း သူမရဲ့ခံစားချက်လေးကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးထားပါသေးတယ် ။ မယ်လိုဒီကိုချစ်ကြတဲ့ ဆယ်လီကမ္ဘာ ပရိသတ်ကြီး အတွက်လည်း ထောက်ကြံ့ရောက်နေတဲ့မယ်လိုဒီရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် …
ပရိသတ်(၅)သောင်းကျော်က အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ခင်ရတနာစိုးရဲ့ တက်တူး
ဝါသနာရှင်ရွက်ပုန်းသီး အဆိုဝါသနာရှင်လေးတွေကို မြေတောင်မြှောက်ပေးနေတဲ့ The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေ မြန်မာသံ တေးသီချင်းလေးနဲ့ ဒိုင်တွေရဲ့ချီးကျူးစကားတွေရော ပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနက်အားပေးမှုကို ပါရရှိခဲ့တဲ့ ခင်ရတနာစိုးဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်လေးကတော့ ပြိုင်ပွဲ ပြိုင်နေစဉ်ကာလမှာထဲက ပရိသတ်အားပေးဝန်းရံမှုတွေ အများကြီးရခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။ သူမကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေကတော့ လတ်တလောမှာ သူမရဲ့တက်တူးအသစ်လေးကို တခဲနက်အားပေးခဲ့ကြတာပါ ။ မိခင်ဖြစ်သူကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Mom ဆိုတဲ့ တက်တူးလေးကို သူမရဲ့ ကျောပေါ်မှာ ထိုးခဲ့ပြီး ဒီတက်တူးလေးကို အားပေးကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်တွေ ငါးသောင်းတောင် ကျော်ခဲ့တာပါ ။ တက်တူးထိုးတာကို မကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်တွေကိုလည်း သူမ က အကျိုးမရှိတာမျိုးမထိုးပါဘူးလို့ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ် ။ ခင်ရတနာစိုးကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးကတော့ …
ပတ္တမြားဒေါင်းလေးကို သိန်း (၃၁၀)အထိ လေလံလိုက်ဆွဲပြီး ကိုဗစ်အတွက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့စမိုင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ ကိုဗစ်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အလှူရှင်တွေ အဖက်ဖက်က လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေကြတဲ့ထဲမှာ အနုပညာရှင်တွေ လည်း ပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့ကြပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ မောင်မောင်အေးနဲ့အတူ သဇင်နွယ်ဝင်းတို့နှစ်ယောက်က ဦးဆောင်ပြီး SP Gems မှ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအလှူအတွက် လေလံပွဲလေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးအလှူ အဖြစ် (၈၈) သိန်း ကြမ်းခင်းဈေးသတ်မှတ်ထားတဲ့ အောင်အတိတ် အောင်နိမိတ်ဆောင် မင်္ဂလာ ဒေါင်းလေးကို သိန်း (၃၁၀) အထိ ဈေးပြိုင် ပေးရင်း လေလံအောင်သွားတဲ့တဲ့သူကတော့ သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ မောင်မောင်အေးက စမိုင်းလ် လေလံအောင်သွားတဲ့အတွက် အကြီးကြီးဂုဏ်ပြုကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ လေလံအပြိုင်ပေးခဲ့သူတစ်ဦးမကျန် နဲ့ …
အပယ်မကျအောင် မဲပေးနည်းတွေ မျှဝေလာတဲ့ လွင်မိုး
ပရိသတ်ကြီးရေ မနက်ဖြန်နိုဝင်ဘာလ(၈) ရက်နေ့ကတော့ နောက်လာမယ့် အစိုးရသက်တမ်း(၅) နှစ်အတွက် အုပ်ချုပ်ပေးမယ့် ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ကိုယ့်ရင်ထဲကဆန္ဒအတိုင်း မဲပေးရွေးချယ်နိုင်မယ့်နေ့လေး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက် အရမ်းအရေးကြီးတဲ့နေ့လေးမို့ မပျက်မကွက် သွားရောက်မဲပေးကြဖို့ အနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးက တိုက်တွန်းနေသလို ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒမဲ တစ်မဲကလည်း ပယ်မဲ မဖြစ်သွားစေဖို့ စစ်ဆေးသင့်တာတွေကို လွင်မိုးက အခုလို မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့ရပ်ကွက်ရဲ့မဲစာရင်း သေချာမှု…အကုန်..ကွက်တိ..မနက်ဖြန်..ဒိုး..ပြီ…ပေးပြီ..အော်..မေ့လို့..ဟိုရောက်ရင်..တံဆိပ်တုံးစစ်ရဦးမယ်… ကြိုးနဲ့ချည်မချည်ကြည့်ရဦးမယ်..နောက်ပြီး..စာအိပ်ပြဲမပြဲ…. UECတံဆိပ်..ပါမပါကြည့်ရဦးမယ်..အားလုံးသေချာအောင်ဂရုစိုက်ပြီး…အပယ်မကျအောင်..အဲ….ယောင်လို့..ပယ်မဲမဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါစို့…. ဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒမဲတစ်ပြားက ပယ်မဲမဖြစ်ရလေအောင် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ.. နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက် မဲထည့်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးသလို ကိုဗစ်ကာလ ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီ လုံခြုံစိတ်ချစွာ မဲပေးကြဖို့ကလည်း အရေးကြီးတာမို့ မနက်ဖြန် မဲရုံကို သွားတဲ့အခါ Mask ၊ ခေါင်းစွပ်၊ Face Shield …
အသည်းကြားက မဲတစ်ပြား သွားပေးဖို့အတွက် လိုလေသေးမရှိပြင်ဆင်ထားတဲ့ ကော်နီ
ပရိသတ်ကြီးရေ မနက်ဖြန်ကတော့ နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအနာဂတ်အတွက် ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ အုပ်ချုပ်သူကို ရွေးချယ်ခွင့်ရမယ့် နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းကြားက မဲတစ်ပြားက တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးတာမို့ နိုင်ငံသားတိုင်းမဖြစ်မနေမဲပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းနေကြသလို ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တာကြောင့်လည်း စည်းစနစ်တကျ မဲပေးကြဖို့ကလည်း အဓိကကျတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါပဲ။ ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော် တေးသံရှင်ကော်နီကတော့ မဲပေးဖို့ အတွက် စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားကြောင်းကို အခုလိုလေး မျှဝေလာပါတယ်။ မဲရုံကိုသွားဖို့ရာ,,,ညကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ, မကော်ဆိုရင်… မှတ်ပုံတင်,(ပိုပိုလိုလိုသန်းခေါင်စာရင်းပါ ဖိုင်လေးနဲ့ယူသွား)လိုက်တယ်, လက်မှတ်ထိုးဖို့ ဘောပန်လေးပါ ဆောင်ထားသေးတာ, ခန္ဓာကိုယ်ကို,ဆံပင်ကမှအစ, လုံအောင်ဖုံးနိုင်သမျှဖုံးထားပါတယ်, Hand Sanitizer (သို့) စပရစ်ဖျန်းတဲ့ ဆေးဘူးလေးလည်း ဆောင်ထားတယ်, ပေးထားတဲ့မဲစာရင်းကဒ်ပြားလေးလည်း မမေ့ကြပါနဲ့နော်, မျက်လုံးအနီးမှုန်ရင်မျက်မှန်လေးယူသွားအုန်း, သောက်ရေဘူးလေးလည်းဆောင်သွားမယ်, ထီးလေးတလက်ပါဆောင်သွားရမယ်, ( ခွေးခြေပလတ်စတစ်ခုံလေးပါယူရမလားပဲ ).. စိတ်အေးအေးထားမယ်, ကိုယ့်အလှည့် …
ဒီနေ့မနက်မှာပဲ အသည်းရောဂါနဲ့ဆုံးပါးသွားတဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံသရုပ်ဆောင် ဂျာရစ်
ပရိသတ်ကြီးရေ အခု(၂၀၂၀) ခုနှစ်ကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော်အနုပညာရှင်တွေတော်တော်များများ ကြွေလွှင့်နေတဲ့နှစ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေနဲ့ ကြေလွှင့်သွားကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းကို စိတ်မကောင်းစွာ ကြားသိနေရသလို ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ ဂျာရစ် ဒီနေ့မနက်မှာပဲ အသည်းရောဂါနဲ့ ဆုံးပါးသွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဂျာရစ်ကိုတော့ နေထူးနိုင်ရဲ့ဇာတ်ကားတော်တော်များများထဲမှာ ပရိသတ်တွေရင်းနှီးခဲ့ကြမှာဖြစ်သလို ပရိသတ်တွေကတော့ နေထူးနိုင်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း ဝမ်းနည်းစွာ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂျာရစ်ကတော့ လတ်တလော ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ ကမ္ဘောဇဓားသမားဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း အကောင်းဆုံးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသလို မင်းသမီးမှူးသခင်ကတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာ သူ့ကို တောင်ရှည်ပုဆိုးဝတ်ဖို့ အမြဲကူညီပေးတတ်တဲ့ စိတ်ထားကောင်းပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျာရစ်အတွက် ဝမ်းနည်းစကားဆိုခဲ့ပြီး ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ဖို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂျာရစ်ကေဝိုင်းလေးနဲ့ ကိုဂျာရစ်ကိုတော့ ပရိသတ်ရင်ထဲ အမြဲရှိနေမှာ ဖြစ်သလို အခုလို စောစောစီးစီး ထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လည်း မိသားစုနဲ့ထပ်တူ …
ရက်ပေါင်း(၁၈) ရက်တိတိ ကုသမှုခံယူအပြီး အိမ်ပြန်ခွင့်ရပြီဖြစ်တဲ့ ကျော်သူနဲ့ထွန်းကိုကို
ပရိသတ်ကြီးရေ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေက ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ပရဟိတမင်းသားနှစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်သူနဲ့ထွန်းကိုကိုတို့ကြောင့် ပရိသတ်တွေဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ ဝမ်းသာစရာသတင်းလေး ဆောင်ယူလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ ရက်ပေါင်း(၁၈) ရက်တိတိ ကုသမှုခံယူအပြီး ဒီနေ့နေ့လည်မှာတော့ ဦးကျော်သူနဲ့ထွန်းကိုကိုတို့ နှစ်ဦးစလုံး အိမ်ပြန်ခွင့်ရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်သူကတော့ အခုလိုအိမ်ပြန်ခွင့်ရဖို့အတွက် သွေးရည်ကြည်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ မမြင်ရတဲ့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင် ပဌာန်းဆက်နှစ်ဦးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့တဲ့အပြင် ကုသပေးခဲ့ကြသော ဆရာဝန်၊ဆရာဝန်မများ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ဝေဘာဂီဆေးရုံအုပ်ကြီးနှင့်တကွ ပြင်ပမှကျွန်တော်တို့အတွက် အဟာရဒါနပြုကြသော အလှူရှင်အပေါင်းတို့နှင့် အားပေးနှစ်သိမ့်မေတ္တာပို့ကြသော ညီ/ညီမငယ် အနုပညာရှင် များ၊ပရဟိတသမားများ၊မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများ၊ပြည်သူလူထုအပေါင်းအပြင် aန့စဉ်ယနေ့တိုင် ဆေးရုံတက်သည်မှအစပြု၍ မေတ္တာဓါတ် ပို့လွှတ်ပေးနေကြသော ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားအပေါင်းတို့အား ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကာ သာဓုခေါ်ဆိုကြောင်း ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဦးကျော်သူနဲ့ထွန်းကိုကိုတို့ နှစ်ဦးစလုံးကတော့ ဝေဘာဂီဆေးရုံကဆင်းပြီး တစ်ပတ်တိတိ ကိုယ့်အိမ်မှာ ပြန်နားမှာဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်ပြည့်လို့ …
မင်္ဂလာသက်တမ်း (၁၆) နှစ်ပြည့်အမှတ်တရစကားလေးမျှဝေလာတဲ့ လူမင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့လေးကတော့ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တည်ထောင်ထားတဲ့ လူမင်းရဲ့ မင်္ဂလာသက်တမ်း (၁၆) နှစ်ပြည့်နေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမင်းကတော့ အခုချိန်မှာဆိုရင် လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့သားလေးတစ်ယောက် သမီးလေးတစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရုံမက ပါရမီဖြည့်ဘက်ကောင်းဖြစ်တဲ့ ဇနီးသည်ကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေမှာလည်း ပိုမိုပြောင်မြောက်လာခဲ့သလို မကြာသေးခင်က ဘူတန်နိုင်က Druk International Film Festival ကချီးမြှင့်တဲ့ 16th Season (Sep 2020) Competition မှာလည်း နို့ဘီလူးဇာတ်ကားနဲ့ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု၊ ဒါရိုက်တာဆု နှစ်ဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ မင်္ဂလာသက်တမ်း(၁၆) နှစ်ပြည့်မှာတော့ အမှတ်တရစကားလေးအနေနဲ့ 16th Anniversary (7.11.2004) to (7.11.2020) ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ ပြန်လှည့်ကြည့်တော့ အေးတာလည်းရှိ ၊ …
ဒီနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ပြည်သူတွေပိုစည်းလုံးဖို့ လိုနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတိပေးလာတဲ့ မောင်မောင်အေး
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့အတွက် ထူးခြားသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ပဲခူးတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးနားမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲတဲ့သတင်းကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါနော်။ လူတစ်ယောက်မှ အထိအခိုက်မရှိပေမယ့် အခုလို မဲပေးရက်ရောက်ခါနီးမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့် ပြည်သူတွေလည်း တော်တော်လေး ထိတ်လန့်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဆန္ဒမဲကို မပျက်မကွက်သွားပေးကြဖို့ကိုတော့ အနုပညာရှင်တိုင်းက တိုက်တွန်းနေကြသလို နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြဲတက်ကြွအသိပေးနေသူ မောင်မောင်အေးကလည်း ပဲခူးဗုံးပေါက်ကွဲမှုအပြီးမှာ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေထပ်မဖြစ်စေဖို့ ပြည်သူတွေကို အရင်ကထက်ပိုပြီး စည်းလုံးသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးစကားရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ပဲခူးမှာ ဗုံးကွဲ သတဲ့… အောက်တန်းစားတွေ စ ယုတ်လေပြီ… ပြည်သူတွေ ပိုစည်းလုံးဖို့ အထူးလိုပါပြီ…မဲရုံပြင်ပတွေမှာ လူစိမ်းတွေရှိနေရင် ဖုန်းနဲ့သာ live တင်ကြပါ…မနက် (၆) နာရီ ကနေ ည မဲ …
ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေအတိုင်း ဖေ့ဘွတ်ခ်အကောင့်တွေ ဖွင့်ထားကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ
ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ မြမြဇာတ်ကားရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်ကတော့ ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာတောင် ပရိသတ်အတွက် အသစ်အဆန်းတွေ ထပ်မံချပြဖို့ကြိုးစားနေကြောင်း မျှဝေလာပါတယ်။ ကိုဗစ်မတိုင်ခင်က Influencer တစ်ယောက်ဖြစ်သူ လှနုထွန်းနဲ့ ယောက္ခမတစ္ဆေဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးဖို့စီစဉ်ထားခဲ့သလို မကြာသေးခင်ကလည်း မျက်နှာသစ်သရုပ်ဆောင်တွေအများကြီးနဲ့ရိုက်ကူးသွားမယ့် Active Now ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲကိုလည်း မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးထဲမှာတော့ မြမြ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့အောင်မြင်မှုရထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းတော်ဝင်နဲ့ သဉ္ဇာဝင့်ကျော်တို့ ပြန်လည်ပါဝင်ထားပြီး မျက်နှာသစ်သရုပ်ဆောင် (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ရိုက်ကူးသွားမှာပါ။ မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ မြင်တွေ့နေကျပုံစံမဟုတ်တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်စုနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ အားပြိုင်မှုကို ရသမျိုးစုံနဲ့ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီး စတင်မိတ်ဆက်ကတည်းက ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုများစွာ ရရှိထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီနေ့မှာလည်း ဇာတ်ကားရဲ့နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် ထူးထူးခြားခြားလေးတစ်ခုလုပ်ထားကြောင်း မျှဝေလာပါတယ်။ Active Now ဆိုတဲ့အတိုင်း …